Soran Ismaciil oo laga joojiyey soojeedinta barnaamij ka baha raadiyaha iyo dhaleeceyn loojeediyey Raadiyaha Iswiidhen - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Soran Ismail waa majaajileyste caan ah soojeediyane ka ah barnaamijka ka baxa la'aanta p3 ee la yiraahdo morgonpasset. Foto: Sverigesradio
Soran Ismaciil oo laga joojiyey soojeedinta barnaamij ka baha raadiyaha iyo dhaleeceyn loojeediyey Raadiyaha Iswiidhen
La daabacay fredag 14 februari 2014 kl 11.10
Dareemo kacsan ayaa laga muujiyey kadib markii Radiyaha Iswiidheen uu ka joojiyey majaajileyste Soran Ismaciil soojeedinta barnaamijk Morgonpasset ee ka baxa Radiyaha Iswiidhen. Maamulka Radiyaha ayaa u soo bandhigey Soran Ismacil kalo doorasho ah in uu sid cad u dhaleeceeyo xisbiga Demkratiyiinta Iswiidhen (Sverigedemokraterna) in uu sii ahaado soojeediyaha barnaamijka morgonpasset.
Arintaan ayaa dareemayaal caro leh dadka kaga muujiyeen alaadaha lagu sheekeysto ee bulshada. Mid kamid ah dadka sida weyn u dhaleeceysan go’aanka Radiyaha Iswiidhen kaga joojiyeen Soran ismaciil soojeedinta barnaamijka waxa weeye Ehsan Fadakar oo madah ka ah boga dooda ee Aftonbladet. Asaga oo xaley ka qayb galayey barmaanijka dooda ee SVT-debatt ayuu sheegey in go’anka yahey mid qalad ah.
- Go’anka waa qalad, waxaa Soran lagu cinqaabayaa halgankiisa uu kaga soo horjeedo cunsurinimada. Waxaa muuqata in cabsida saxaafada dadweynaha ay meel fog gaartey oo iminka la dagaalanka cunsurida ayaa noqtey wax laga cararo oo dhib ah oo aysan hadda aheyn cunsurida mid dhibka ah.
Cilla Benkö waa mareeyaha sare ee Sveriges Radio, iyada oo ka qayb qaadaneysey barmaaijka SVT-debatt ayey kaga jawaabtey dhaleeceynta loo jeedinayo go’aanka looga joojiyey sida ku meel gaarka ah shaqada Soran Ismaciil sida tan:
- Arinta dhacdey waxa weeye; waxaan leenahey dhabo tusyaal aan raacno marka doorasho soo socoto, kuwaas oo aan horey u raaci jirney weligeena raaci doono. Dhabo tusyadan waxey si kooban u oranayaan "haddii ruux si cad u taageero ama uga horyimaado xisbi markas ruuxas ma ahaan karo ruux ku leh kaalin muuqada barnaamij ka baxa Radiyaha iswiidhen inta ay doorasho socoto".
- Soran Ismaciil waxuu wado hadal la sameeyey sheefkiisa ugu dhow, waxeyna wadogarteen in Soran inta doorashooyinka socdaan uu doorbidayo in uu si firfircoon u wado ka horimaashaha cunsuriyada iyo shisheeye naceybka. Waxuuna rabaa in uu si firfircoon uga hormiyaado xisbi.
Xisbiga la sheegey in uu Soran Ismaciil doonayo si firfircoon uga horyimaado waa xisbga soogalooti diidka ah Demokaratiyiinta iswiidhen (Sverigedemokraterna) oo xil-dhibaano ku leh barlmaanka Iswiidhen.
Waxey aheyd november 2012 markii wargeyska Expressen fashiley fadeexad video ah oo ay ka muuqdeen sadeex mudane oo katirsan xisbigan Sverigedemokraterna, oo ku oranaya Soran Ismaciil ”waxaad u hadlaysaa sida babe” oo ay kalo jeedaan daanyeer, ”halkan waa wadankeyga” ” ha isku kacinina Iswiidhish haddii kale mustaqbalka ayaa ka shalaayi doontiin”.
Idaacadda Radiyaah Iswiidhen iyo telefishinka SVT ayaa ah warbaahin dadweynaha u dhaxeysa oo lagu maageliyo qidmad laga qaado dadweyanaha. Kanamadax banaan xisbi siyaasadeed dano gaar ah.